Iindaba - Iiglasi zedanyang City idatha yorhwebo lwangaphandle ukusukela ngoJanuwari ukuya kuJuni 2020
Iiglasi zedanyang City idatha yorhwebo lwangaphandle ukusuka kuJanuwari ukuya kuJuni 2020
Ukususela ngoJanuwari ukuya kuJuni 2020, ixabiso lilonke lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwiiglasi ze-Danyang yayizi-US $ 208 yezigidi, ukwehla konyaka-nge-2.26%, ukubalwa kwe-14.23% yexabiso lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe eDanyang. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa ngaphandle kweiglasi yayiyi-US $ 189 yezigidi, ukwehla konyaka-nge-4.06%, ukubalwa kwe-14.26% yexabiso elipheleleyo lokuthumela ngaphandle kweDanyang; ukungeniswa kweiglasi yayiyi-US $ 19 yezigidi, ukunyuka konyaka-nge-26.26%, kubalwa i-13.86% yexabiso lokungenisa lilonke leDanyang.
[Idatha] Imeko yokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwiimveliso zeglasi zesizwe ngokwahluka ukusuka kuJanuwari ukuya kuJuni 2020
Ukusukela ngoJanuwari ukuya kuJuni 2020, ukuthunyelwa ngaphandle kwe China kwimveliso yeglasi (ngaphandle kwezixhobo kunye nezixhobo) kufikelele kwi-US $ 2.4 yezigidigidi, ukwehla konyaka-nge-13.95%. Ukusuka kuhlalutyo lweendidi zemveliso yeliso: ukuthunyelwa ngaphandle kwezibuko zelanga, iiglasi zokufunda kunye nezinye iilensi ezibonakalayo yayiyi-US $ 1.451 yezigidigidi, ukwehla ngonyaka ngonyaka nge-5.24%, kubalwa i-60.47% yetotali yayo yezigidi, ukwehla konyaka-nge-34.81%, kubalwa i-22.84% yetotali); Ukuthunyelwa kwesakhelo yayizizigidi ezingama-US $ 427 yezigidi, ukwehla konyaka ngama-30.98%, kubalwa i-17.78% yetotali iyonke; ukuthunyelwa ngaphandle kweelensi zamehlo kwaba yi-US $ 461 yezigidi, ukwehla konyaka-nge-15.79%, kubalwa i-19.19% yetotali.
Ukusukela ngoJanuwari ukuya kuJuni 2020, ukungeniswa kwe China kwimveliso yeglasi (ngaphandle kwezixhobo kunye nezixhobo) yayizizigidi ezingama-574 zeedola zaseMelika, ukwehla konyaka ngonyaka nge-13.70%. Ihlolwe kudidi lweemveliso zamehlo: ukungeniswa kweendondo zelanga, iiglasi zokufunda kunye nezinye iilensi yayizizigidi ezili-166 zeedola zaseMelika, ukwehla konyaka ngonyaka nge-19.45%, kubalwa i-28.96% yetotali;
Ukungeniswa kweefreyimu zemiboniso yayizizigidi ezingama-58 zeedola zaseMelika, ukwehla ngonyaka ngonyaka ngama-32.25%, kubalwa i-10.11% yetotali iyonke; ukungeniswa kweelensi zemiboniso kunye nokushiyeka kwazo bekuyi-US $ 170 yezigidi, ukwehla konyaka-nge-5.13%, kubalwa i-29.59% yetotali iyonke; Iilensi zonxibelelwano zine-US $ 166 yezigidi, ukwehla konyaka-nge-1,28%, i-Akhawuntingi ye-28.91% yetotali.